သူမကဆံပင်အရှည်ထားမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဆံပင်အရှည်ထားနေရကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ချစ်သူ – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ ကတော့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အား ပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ချစ်သူ ဇင်မြင့်အောင် နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပရဟိတလုပ်ငန်းများစွာကို အတူတကွ လုပ် ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ခိုင်နှင်းဝေ ဆီမှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်လဲရှိပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တာရာယ် တွေ ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ ခိုင်နှင်ဝေတို့ကလဲတတ်နိုင်သလောက်သွားရောက် မေးမြန်းပြီးလိုအပ်တာများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ် ကျသွာဗရာက်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ခိုင်းနှင်ဝေ နဲ့သူရဲ့ချစ်သူကတော့နားရက်တွေမှာလဲ အတူတကွဖြတ်သန်းကြပါတယ်။ ချစ်သူကောင်မလေး ခိုင်နှင်းဝေကဆံပင်ရှည်မှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ အရှည်ထား နေရတဲ့ ဇင်မြင့်အောင် ကဆံပင်ရှည်မှကြိုက်တယ်ဆိုတော့လဲ…. ဟုဆိုပြီးတော့သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝေ ကတော့ကရြာဇာတျကောငျတှမှောအကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့အား ပေးမှုကိုအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့မငျးသမီးကွီးပဲဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ခဈြသူ ဇငျမွငျ့အောငျ နဲ့ပူးပေါငျးပွီးတော့ပရဟိတလုပျငနျးမြားစှာကို အတူတကှ လုပျ ကိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျ..။
ခိုငျနှငျးဝေ ဆီမှာတော့ခဈြစရာကောငျးတဲ့သမီးလေးတဈယောကျလဲရှိပါသေးတယျ။ လကျရှိမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ရောဂါကပျဆိုးကွီးနဲ့ သဘာဝဘေးအန်တာရာယျ တှေ ကွောငျ့အခကျအခဲဖွဈနကွေတဲ့ပွညျသူတှမြေားစှာရှိနပေါတယျ။ ခိုငျနှငျဝတေို့ကလဲတတျနိုငျသလောကျသှားရောကျ မေးမွနျးပွီးလိုအပျတာမြားကို ကိုယျတိုငျကိုယျ ကသြှာဗရာကျလှူဒါနျးပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ..။
ခိုငျးနှငျဝေ နဲ့သူရဲ့ခဈြသူကတော့နားရကျတှမှောလဲ အတူတကှဖွတျသနျးကွပါတယျ။ ခဈြသူကောငျမလေး ခိုငျနှငျးဝကေဆံပငျရှညျမှကွိုကျတယျဆိုလို့ အရှညျထား နရေတဲ့ ဇငျမွငျ့အောငျ ကဆံပငျရှညျမှကွိုကျတယျဆိုတော့လဲ…. ဟုဆိုပွီးတော့သူရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာပုံနဲ့တကှဖျောပွထားပါတယျ..။